Waa rasmi. Taxanaha Tehran waxay yeelan doonaan xilli labaad | Waxaan ka socdaa mac
Waa rasmi. Taxanaha Tehran waxay yeelan doonaan xilli labaad
Sidee bay u yaraan kartaa oo sidii horeba looga shakiyay bilowga Diseembar, taxanaha Apple TV +, Tehran waxay yeelan doontaa xilli ciyaareed labaad. Ka dib markii aan ka tagnay dhammaanteen kuwii arkay qaybta hore ee xiisaha leh, waxaan ugu yaraan dhoola cadeyneynaa annagoo og in aan raaci karno dhiirrigelinta jilaayaasheeda.
Bishii Diseembar ee la soo dhaafay, bilowgii, waxaan kugula socodsiinnay in soo-saarayaasha Tehran ay aad uga hubsan yihiin in Apple ay cusbooneysiin doonto xilli labaad. Xitaa iyadoo sidaas ah, iyo iyada oo aan la xaqiijin shirkadda Californian, shaqadu waxay ka bilaabatay mashruuca. Hadda taas waan ognahay Apple waxay rabtaa xilligaas labaad Uma baahnid dhiirrigelinta basaasnimada aad ugu jeceshahay inay u tagto adeeg kale.
Haddii aad raacday xilligii ugu horreeyay ee Tehran, waad arki doontaa xiisaha wakiilka mossad yaa ku dhex dhuumanaya hawlgal ka socda Tehran. Qof kasta oo hareeraheeda ah waxay gelisaa khatar aad u weyn. Musalsalka waxaa jilaya Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi, iyo Menashe Noy.
Wali ma ogin goorta hordhaca noqon doono ee xilli ciyaareedkan labaad oo aan weli dhammaan. Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa sida dhacdooyinku u dhacaan oo aan u aragno sida filimku u socdo. Iyadoo lagu xisaabtamayo in uusan jirin dib u dhac ama baajin sababo la xiriira masiibo caalami ah oo ay soo saartay COVID-19, sida ku dhacday wax soo saar kale.
Waxaan aragnaa sida tartiib tartiib ah waxyaabaha ka socda Apple TV + ay u sii xoojinayaan una kordhayaan waxtarka dhammaan macaamiishooda, taas oo nasiib darro u leh shirkadda weli ma muujinayaan tiro aad u tiro badan oo iyaga ka mid ah. Apple waxay tixgelineysaa adeegan qulqulka sida haddii ay tahay marathon. Tartan fog taas oo uu ku rajo weyn yahay in maalin uun uu iska dhigo meelaha ugu horreeya, in kasta oo uu runtii ku adag yahay tartamayaasha uu haysto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Waa rasmi. Taxanaha Tehran waxay yeelan doonaan xilli labaad
Muxuu yahay vodrio kii ugu horeeyay, inuu ahaado Isbaanish, waxaan ku daalay aqrinta subtitles, way ka xun tahay aragtida, taas oo dhaheysa.
Ku jawaab Jimmy imac
La sii daayay nooca 14.4 ee loogu talagalay Apple HomePods
Ilaa dhamaadka guga ha sugin AirPods Pro cusub